Mitondra tsiky ny Lions Club | mandimby maharo
Mitondra tsiky ny Lions Club	Posted on 25 July 2012 by Mandimby Maharo	Ny 09 ka hatramin’ny 20 aogostra 2012 izao no ho tanterahana indray ny Operation Smile, karakarain’ny Lions Club Madagascar sy ireo mpandidy avy atsy Afrika Atsimo. Toy izao ny fandaharam-potoana amin’ity andiany faha 8 ity. Ny 09 sy ny 10 aogostra no hanao ny fizahana ireo mpitsabo ka afahany mamaritra izay mila fandidiana. Fandidiana izay ho tanterahana manomboka ny 13 ka hatramin’ny 17 aogostra tapak’ando. Hisy avy eon y fanarahamaso ireo avy nodidiany ny 20 aogostra. Toy izay efa fanao isan-taona moa dia etsy amin’ny Hopitaly Joseph Randrianavalina Anosy avokoa no ho tanterahina ireo asa rehetra ireo.
Ny Operation Smile moa dia ketsika iray entin’ny Lions Club Madagascar sy ireo mpilatsaka an-tsitrapo maro miara miasa aminy mba hanomezana tsiky ireo zaza tratry ny “ente labio-palatine “, na ilay antsoina hoe sima. Ka isan-taona no mandalo eto ireo mpitsabo ireo. Hatramin’ny taona 2007 niatombohan’ity hesika ity dia olona miisa 1200 no efa nahazo fandidiana sy fanarahamaso maimaim-poana. Io fanaraha maso io izay miompana indrindra amin’ny fampianarana oreo vita fandidina hahay miteny tsara. Fampianarana izay maharitra eo amin’ny 6 vola eo ho eo. Noho izay maha asa soa azy indray no iantsoan’ireo mpikarakara ny fiaraha-miasa amin’ireo izay tsara sitrapo ka afaka anome tolo-tanana amin’ity taona ity. Eo ohatra ny fandikan-teny izay ilaina tokoa satria dia miteny anglisy ireto mpitsabo ireto. Ary amin’ny maha zaza ireo mpahazo tombotsoa amin’izao hetsika izao dia ilaina fahaizana mampiresaka sy milalao ary manambitamby azy ireo. Eo ihany koa ohatra ny fanampiana ireo ray aman-dreny amin’ny fibatana ireo zaza ireo eo amin’ny fivezivezena maro samy hafa eo amin’ny toera-pitsaboana.
Antso ary no ampita ho an’ireo izay tratr(ity aretina ity. Antso miantefa ihany koa ho an(ireo izay te holatsaka an-tsitra-po hanome tanana. Marihina fa mitentina 500 dolara isan’olona no saran’ny fandidiana. Voafetra ihany araka izany ny isa ho azo atao, ary anisan’ny omena vakana kokoa ireo marary avy amin’ny fianankaviana sahirana. Vaovao lehibe koa no nahalalana fa raha indray isan-taona hatramin’izay no nandalovan’ireo mpitsabo ireo dia ho in-droa izany manomboka ny taona 2013.
Tags: 2012, Lions Club Madagascar, Operation SmileCategories: societé